I-Snapdragon 855 Plus: I-Qualcomm ivuselela isiphelo sayo esiphakamileyo | I-Androidsis
I-Snapdragon 855 Plus: Ukuhlaziywa kweprosesa yeQualcomm
Imimangaliso yeQualcomm ngokubhengeza iSnapdragon 855 Plus. Kukuhlaziywa kweprosesa yakho yangoku ephezulu, thaca ngokusesikweni kunyaka ophelileyo. Sifumana amandla amakhulu kule meko, ukuze iprosesa yiya ukunika ukusebenza okungcono xa udlala. Yeyona njongo iphambili kolu hlaziyo.
I-Snapdragon 855 Plus ine uyilo olufanayo kunye nenani elifanayo leempawu Kunemodeli yoqobo. Kule meko kuphela, iQualcomm ikhethe ukwazisa amandla ngakumbi kuyo. Ayiloxesha lokuqala ukuba uphawu lwaseMelika lwenze into efanayo malunga noku.
Olona tshintsho lubaluleke kakhulu kwi-Snapdragon 855 Plus lwenziwe ngesantya. Le chip intsha inesakhono sokufezekisa isantya esiphezulu. Yiya e ngoku unesantya esiphezulu se-2,96 GHz, xa kuthelekiswa no-2,8 koqobo. Kwakhona i-GPU yakho ifumana i-15% yamandla ngakumbi kule meko.
Ezi nguqu zimbini zenziwe ngeefowuni zemidlalo engqondweni, njengoko siye sakwazi ukwazi. Ke iQualcomm inomdla omkhulu kweli candelo lentengiso, eliqhubeka nokukhula namhlanje, ngeemodeli ezintsha kulo. Bazokwazi ukusebenzisa le chip ukusukela ngoku.
Ngapha koko, inkampani ilindele ukuba iifowuni zokuqala zisebenzise i-Snapdragon 855 Plus ukuya kuyo phosa kwesi siqingatha sesibini zonyaka. Okwangoku akukho phawu lubhengezileyo. Kodwa kunokwenzeka ukuba ii-smartphones zemidlalo ezikhutshiweyo kwiinyanga ezizayo ziya kuba nale processor ngaphakathi.
Ngayiphi na imeko, siya kujonga ukuze sibone ukuba ngaba kukho iimveliso ezisebenzisa le chip. Ukuphumla, i-Snapdragon 855 Plus ayishiyi zinguqulelo xa kuthelekiswa neyasekuqaleni. Isantya esiphezulu, ngaphandle kotshintsho oluncinci, siqinisekile ngomdla kubasebenzisi abaninzi abazokuthenga i-smartphone yokudlala kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 855 Plus: Ukuhlaziywa kweprosesa yeQualcomm
U-Huawei angawuvala unyaka ngentengiso egciniweyo
IHuawei iceba ukudiliza amakhulu abasebenzi bayo eMelika